မြွေပိုက်ကွန်ပြတင်းပေါက်တရုတ်ကာကွယ်ရေးလက်ပေးသွင်းသူ - လက်ကားရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်လျှော့စျေးထုတ်လုပ်ခြင်း - Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > insulator တွင်လည်းလက် > Braided ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု > မြွေပိုက်ကွန်ကိုပြွန်
serpentine ကွက်ပြွန်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသော PET ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပွန်းပဲ့နိုင်ခြင်း၊ ချဲ့နိုင်ခြင်း၊ ချောချောမွေ့မွေ့ခြင်း၊
serpentine ကွက်ပြွန်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသော PET ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပွန်းပဲ့နိုင်ခြင်း၊ ချဲ့နိုင်ခြင်း၊ ချောချောမွေ့မွေ့ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များကိုကွန်ပျူတာပါဝါကြိုးများ၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုကေဘယ်လ်များ၊ အလင်းရောင်၊ လေအေးပေးစက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များနှင့်အခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများအပြင် optical cable များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ မော်တော်ကားများ၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရ၎င်းတို့ကို monofilament သို့မဟုတ်သုံးချည်မျှင်ဖြင့်ရက်လုပ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအကျယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများယက်ကွန်ယက်ကိုပြွန်။
1. အပူချိန်: -50 ~ + 150â;
မြွေကွန်ယက်ပြွန် parameters တွေကို:
1000 လိပ် / လိပ်
500 မီတာ / လိပ်
350m / လိပ်
300 လိပ် / လိပ်
250m / လိပ်
200 လိပ် / လိပ်
150m / လိပ်
100 လိပ် / လိပ်
၁-၃ / ၄
မှတ်ချက်များ - အထက်ပါအချက်အလက်သည် PET ပစ္စည်းဖြစ်သည်
ကြိုတင်ရောင်းအား - Pre-sales will actively coမီလီမီတာunicate with customers detailed information, customer needs, product parameters, quality standards, provide consultation, accept telephone orders and mail orders, provideavariety of convenience and financial services, etc.
Hot Tags: insulation လက်, တရုတ်, Serpentine အသားတင်ပြွန်ထုတ်လုပ်သူ, လက္ကား, ဝယ်, စျေးနှုန်း, အမြောက်အများ, လျှော့စျေး, quotation အ။